Imtixaannada wadajirka ah ee waddammada looga baahan yahay: dhammaan waddammada iyo shuruudaha | Wararka Safarka
Imtixaannada wadajirka ah ee waddammada u baahan yihiin
Luis Martinez | | Talooyin, General
Ogow Imtixaanka isku dhafan looga baahan yahay dalalku waxay noqdeen macluumaad lagama maarmaan ah sanad kadib markii uu faafay cudurka. Waxaad xiiseyneysaa inaad la socotid iyaga, gaar ahaan haddii ay qasab tahay socdaal badan ganacsi ama booqashada qaraabada.
Sababtoo ah umad waliba waxay leedahay heerar kala duwan oo uu cudurka ku qaado ilaa iyo tallaalku si tartiib ah ayuu u socdaa, qaab guud lama dhisi karo shuruudaha lagama maarmaanka u ah safarka. Xitaa suurtagal ma ahayn in tan lagu dhaqmo gudaha Midowga Yurub, kuwaas oo gobolladoodu sidoo kale ku kala duwan yihiin baahida ama in aan la samayn tijaabooyin lagu booqanayo deegaannada ay ka soo jeedaan. Waxaas oo dhan, waxaan dib kuugu eegeynaa tijaabooyinka loo baahan yahay ee loo yaqaan 'Covid tests' waddan ahaan.
1 Imtixaannada wadajirka ah ee waddanku u baahan yahay: laga bilaabo aasaasiga illaa lagu taliyo
1.1 Tijaabinta wadajirka ah ee Midowga Yurub
1.1.5 Nederland, waxay ka mid tahay kuwa ugu adag xaga imtixaanada loo yaqaan 'Covid tests' ee waddamadu u baahan yihiin
1.2 Imtixaannada wadajirka ah ee looga baahan yahay waddamada ka baxsan Midowga Yurub
1.2.2 la fahmay
1.2.3 Switzerland, mid kale oo ka mid ah kuwa ugu baahida badan marka la eego imtixaannada Covid ee waddamadu u baahan yihiin
Imtixaannada wadajirka ah ee waddanku u baahan yahay: laga bilaabo aasaasiga illaa lagu taliyo
Waxaan dib-u-eegista ku bilaabi doonnaa Midowga Yurub laftiisa, maadaama ummadaha ka kooban ay ka mid yihiin kuwa ugu booqashada badan. Kadibna, waxaan falanqeyn doonnaa xaaladaha ka jira qaybaha kale ee adduunka, gaar ahaan waddamada qaata tirada ugu badan ee socdaalayaasha ah.
Tijaabinta wadajirka ah ee Midowga Yurub
Gobollada Midowga Yurub waxay leeyihiin qaar shuruudo adag markaad qaabilayso martida. Ballaarinta xoogga leh ee aafada ku haysa dhulkooda waxay kula talinaysaa sidan. Xaqiiqdii, marka lagu daro imtixaannada u dhigma ama imtixaannada PCR, waxay badanaa weydiistaan ​​dukumiinti kale. Mustaqbalka dhow, sidoo kale waxaa loo tixgelinayaa in la hirgaliyo a Baasaboor isku dhafan. Aan aragno xeerarka waddan ahaan.
Tixgeli Espana aagga khatarta sare. Sidaa darteed, cabirradeedu waa ee ugu adag. Haddii aad ka soo safreyso waddankeena, waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la fuliyay 48 saacadood ka hor intaadan imaan. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad isqortaa a diiwaanka dijitaalka iyo, mar aad dalka joogtid, badbaadi a 10 maalmood karantiil kuwaas oo loo dhimayo 5 haddii aad soo bandhigto tijaabo taban oo Covid ah.
Ma ogola in laga duulo Spain waqtigaan. Haddii aad ka sameysid waddan kale, waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la fuliyay illaa 72 saacadood kahor imaatinkaaga. Sidoo kale, waa inaad sameysaa a dhaarta elektarooniga ah inaadan ku xanuunsanayn cudurka oo aad buuxiso a Goobta Rakaabka. Ugu dambeyntii, waxay dalban doonaan a 7 maalmood karantiil.
Baaskiil kululaa ama mashiinka PCR
Deriskeena ayaa noo ogolaanaya inaan soo galno dalkooda, laakiin waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad soo bandhigto PCR diidmo leh ugu badnaan da'da 72 saacadood oo aad daboosho a qoraalka dhaarta inaadan haysan Covid. Sidoo kale, haddii aad astaamo ku aragtid jidkaaga ama imaatinkaaga, waa inaad isku koobto naftaada.
Waxay ahayd mid ka mid ah waddamadii ugu horreeyay ee ay ku dhacday aafada cudurka oo waliba u oggolaanaysa soo gelitaanka Isbaanishka. Laakiin, haddii aad rabto inaad booqato yaabab sida Roma o FlorenciaWaa inaad sidoo kale soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la sameeyay ugu badnaan 48 saacadood kahor safarka waana inaad buuxisaa warqad dhaar ah kahor safarka. Sidoo kale, haddii aad leedahay astaamo, waa inaad go'doomisaa naftaada.
Nederland, waxay ka mid tahay kuwa ugu adag xaga imtixaanada loo yaqaan 'Covid tests' ee waddamadu u baahan yihiin
Sidaan kuu sheegayno, ummadaha oggol safarka Isbaanishka, kani waa mid ka mid ah kuwa ugu adag xagga shuruudaha. Sababtoo ah waxay ku weydiinayaan baaritaanka PCR illaa 72 saacadood, iyo sidoo kale inay buuxiyaan a foomka baaritaanka caafimaadka labadaba marka laga baxayo iyo jidka loo noqonayo iyo shuruudaha kale.
Si kastaba ha noqotee, haddii waxaas oo dhan aad leedahay wax astaamo ah, waxay kaa hor istaagayaan inaad dalka soo gasho. Iyo, haddii ay kiciso markaad timid, waa inaad keydisaa 10 maalmood karantiil.
Waxaad sidoo kale u safri kartaa deriskeena reer galbeedka haddii aad rabto, laakiin xayiraadyo kala duwan. Waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo lagu fuliyaa 72 saacadood ka hor intaadan soo gelin dalka.
Sidoo kale waa inaad daboosho a kaarka goobta rakaabka Iyo, haddii Spain ay joogto heerar ka badan 500 xaaladood 100kii qof ee deggan (taas oo aan hadda ahayn), waa inaad keydisaa 14 maalmood karantiil. Dhinaca kale, haddaad u tagto Madeira o Azores, waxay sidoo kale ku weydiin doonaan inaad buuxiso a su'aalaha faafa.
Qofku wuxuu qaataa tallaalka 'Covid'
Imtixaannada wadajirka ah ee looga baahan yahay waddamada ka baxsan Midowga Yurub
Waxaan ka helnaa dalabyo badan oo kala duwan oo ka socda ummadaha aan ka tirsaneyn booska guud ee Yurub. Wadamada qaarkood caddayn looma baahna, laakiin kuwaa dhinac ayaan iska dhigi doonnaa. Aan aragno kuwa u baahan nooc ka mid ah shuruudaha.
Waxaan ka bilaabaynaa gobolka ka baxay Midowga Yurub oo leh mid ka mid ah heerarka tallaalka adduunka ugu sarreeya. Waad booqan kartaa hadaad rabto, laakiin waa inaad buuxisaa a foomka goobta rakaabka markaad timaado. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo kuxiran daqiiqada faafa ee ay tahay, waxaad u baahan kartaa inaad sameyso a 10 maalmood karantiil.
Waddankan, sidoo kale, tallaalku aad buu u horumarey. Si kastaba ha noqotee, ma ogola in soo galootiga Spain ka soo galaan. Dhinaca kale, haddii aad ka timaaddo meel kale, waad awoodi doontaa inaad soo gasho waddanka, laakiin waa inaad soo bandhigtaa PCR aan fiicnayn oo la qabtay 72 saacadood ka hor imaatinkaaga ama taariikhda kuugu dhow.
Switzerland, mid kale oo ka mid ah kuwa ugu baahida badan marka la eego imtixaannada Covid ee waddamadu u baahan yihiin
Dalka Switzerland wuxuu ku yaal bartamaha Qaaraddii Hore, in kasta oo aanu ka tirsanayn Midowga Yurub, haddana wuxuu ka mid yahay aagga Schengen. Heshiiskani wuxuu baabi'iyay xuduudihiisa dibedda, si kastaba ha noqotee, hadda, Switzerland waxay aad u xaddidan tahay xagga soo dhoweynta dadka safarka ah.
Waad u tagi kartaa, laakiin waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la fuliyay 72 saacadood ka hor intaadan imaan. Markaad halkaa gaarto, waa inaad sameysaa a 10 maalmood karantiil Taasi waa loo yareyn karaa 7 haddii ay dhacdo inaad hesho PCR kale. Sidoo kale, waa inaad dhammaystirtaa a la xiriir kaarka raadinta.
Waddankii uu ka yimid cudurkan faafa sidoo kale hada waa mid aad u xaddidan marka la eego soo dhoweynta martida. Haddii aad rabto inaad u safarto Shiinaha, waxaad u baahan doontaa inaad soo bandhigto PCR iyo a IGM (immunoglobulin detection) diidmo ayaa la sameeyay 48 saacadood kahor imaatinkaaga. Intaas waxaa sii dheer, waa inay fuliyeen sheybaar ku yaal cadaalad oo ay bixiso safaaradda dalka.
Kaliya kan, waa inuu ku siiyaa adiga tarjeta oo markaad tagto Shiinaha, waa inaad ku celi PCR oo buuxi a foomka caafimaadka. Haddii ay dhacdo in tan hore ay tahay mid togan, waxaa lagugu qasbi doonaa inaad ku gudubto a 14 maalmood karantiil.
Dalka Waqooyiga Ameerika wuxuu ka mamnuucayaa soo galootiga dalkiisa soo gala safarada soo maray 14 maalmood kahor imaatinkaaga Spain. Haddii aad ka safreyso ummad kale, waa inaad daboosho a foomka macluumaadka iyo waliba a bayaanka caafimaadka intuusan bixin. Intaa waxaa dheer, gobol kasta wuxuu leeyahay xayiraad u gaar ah.
Dariskeena koonfurta ayaa joojisay duulimaadyadii ka imaan jiray Spain. Haddii ay dhacdo inaad ka timaaddo waddan kale, waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la sameeyay illaa 72 saacadood safarka ka hor. Intaas waxaa sii dheer, waa in lagu qoraa Faransiis, Ingiriis ama Carabi. Ugu dambayn, markaad timaado, waxay ku weydiisan doonaan kanaga kaarka caafimaadka rakaabka.
In kasta oo ay ku jirto antipode-keena, waxaad u baahan kartaa ama aad dooneysaa inaad u safarto Australia. Xaaladdaas, annaga ayaa taas kuu sheegi doonna kama fasaxsana Spain. Haddii aad ka baxdo ummad kale, iyagu mid bay ku weydiinayaan bayaanka safarka waana lagugu qasbi karaa inaad dhaafto a 14 maalmood karantiil.
In kasta oo ay tahay mid ka mid ah waddamada uu sida aadka ah u saameeyay cudurkan safka ah, Brazil waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka safarto Spain. Si kastaba ha noqotee, waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la fuliyay illaa 72 saacadood ka hor safarkaaga oo aad buuxiso a foomka caafimaadka.
Haddii aan ka hadalno tijaabooyinka loo baahan yahay ee loo yaqaan 'Covid tests' ee waddammada, Mexico waa mid ka mid ah kuwa ugu baahida yar. Si aad ugu safarto halkaas, waxaad kaliya u baahan doontaa inaad daboosho wicitaanka Su'aalaha aqoonsiga qodobka halista safarka marka aad timaado.
Wadanka Caribbean-ka, oo taariikh ahaan ku xiran Spain, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo gasho hadaad ka timaado wadankeena. Si kastaba ha noqotee, waa mid aad u baahan marka la eego shuruudaha. Waa inaad soo bandhigtaa PCR la qabtay 72 saacadood ka hor safarka.
Markaad timaaddo, waa inaad buuxisaa a cadeynta caafimaadka waana macquul inay adiga kaa dhigaan PCR kale. Intaas waxaa sii dheer, waxaa waajib kugu ah inaad bixiso a heerka 30 doolarka Mareykanka ah iyo, haddii PCR-kii ugu dambeeyay ee la soo sheegay uu yahay mid togan, waxaa lagugu qasbi doonaa inaad u hogaansato rinjiga.
Waddankan sidoo kale waxaa si xun u saameeyay aafada. Xaqiiqdii, xilligan safarka looga imanayo Spain waa mamnuuc. Haddii aad ka sameysid waddan kale, waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo leh illaa 72 saacadood oo aad saxeexdid a dhaarta caafimaadka. Ugu dambeyntiina, waa inaad wax ku darsataa caddeyn inaad leedahay caymis kaas oo daboolaya kharashaadka caafimaad ee suurta galka ah ee uu sababo 'Covid' haddii ay dhacdo inaad ku dhacdo cudurka.
Xarunta baaritaanka Covid-19 ee New Zealand
Waxay ahayd mid ka mid ah ummaddihii ugu horreeyay, Shiinaha ka dib, ee uu ku dhacay aafada. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta ay u adag tahay marka la qaabilayo dadka safarka ah ee ka yimid dalalka kale. Marka laga hadlayo kuwa ka yimid Spain, ma ogola in ay soo galaan hadii ay ku soo qaateen dalkeena 14-kii maalmood ee ugu dambeeyay.
Duulimaadyada ka yimaada Spain waa la hakiyay, ugu yaraan, ilaa Abriil 30. Haddii aad ka safreyso waddan kale, waa inaad ku soo bandhigtaa PCR diidmo Ingiriis ah oo aad sameysaa illaa 72 saacadood kahor imaatinkaaga. Sidoo kale, waxaa lagugu qasbi karaa inaad keydiso 14 maalmood karantiil.
Sidoo kale dalka Andean wuxuu leeyahay duulimaadyada ka yimaada Isbaanish waa mamnuuc, ugu yaraan illaa bartamaha Abriil. Haddii aad ka timaado meel kale, waa inaad soo bandhigtaa PCR diidmo ah oo la qabtay 72 saacadood ka hor safarka. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad soo dejiso a warbixin taban oo dabool a dhaarta caafimaadka sidoo kale dhamaan saacadaha 72 kahor duulimaadkaaga xidhiidhkan.
Gabagabadii, waxaan kuu samaynay dib u eegis ku saabsan Imtixaannada wadajirka ah ee waddammada u baahan yihiin. Sidaad arki karto, haddii aad rabto inaad safar gasho, waxaad la kulmi doontaa xayiraad badan. Tanina ma hagaageyso illaa tallaalka uu weynaado. Laakiin ugu yaraan waad sii wadan kartaa safarka, taas oo aan wax yar ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Imtixaannada wadajirka ah ee waddammada u baahan yihiin
Buugaagta safarka sare ee 10 ee loogu talagalay dadka jecel xiisaha